बस्नेतकी छोरी विहे गर्दा राजधानीमै दमाई परिवारको उठिबास
१७ बर्ष उमेर भएकी तर कागजातमा अहिले बाबुआमाले १५ बर्ष लेखाएका छन् । ११ कक्षामा अध्यानरत थिइन् । काठमाडाैकाे बस्नेत परिवारककी छोरी हुन् । जनता समाजवादी पार्टीका शिल्पी बिभाग प्रमुख दलमर्दन कामीका अनुसार मजदुरी गरेर पेट पाल्दै गरेको परियार दमाई समुदायको २१ वर्षीय युवासँग प्रेम बिबाह पश्चात जेल जानुपर्ने र बाबुआमा आफन्त सबै भागरेभाग भई उठिबास हुनु परेको घटनाले सम्पूर्ण दलित समुदायमा आक्रोश पैदा गरेको छ ।
जनबनी गर्दै नेवार समुदायको एक ब्यक्तिको घरमा डेरा बसेका बर्देवा थरका दमाई परिवार छोराले क्षेत्रीनी बुहारी ल्यायो भनेर मख्खै थिए । बुहारी ल्याएको एक हप्तापछि नाबालिकालाई अपहरण तथा बलात्कार मुद्दा लगाएर छोरालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्यो । त्यो सबै तल्लो जातसंग छोरी गई भनेर बस्नेत परिवारले झुठा मुद्धा हालेको थियो तर बिबेकहीन राज्य सत्ताको पुलिस प्रशासनले कुरो बुझेन ।
छोराको कमाईबाट छाकटार्दै आएका बाबुआमा छोरालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि मानसिक सन्तुलन गुमे जस्तै भएका छन । बुहारीलाई पनि माइतीले अपहरण शैलीमा लगेर कुटपिट गर्दै दमाईलाई छाड भने । त्यहि केटा मलाई चाहिन्छ नत्र म मरि दिन्छु भनेर आत्माहत्याको प्रयास पनि गर्दै माइतीको यातना सहिन । तर पनि उनका आफन्तले त्यो केटालाई प्रहरी हिरासतबाट निकाल्न वा त्यो केटासँग विवाह गर्न दिएनन् । बरु कसरी हुन्छ धेरै भन्दा धेरै सजाय दिएर केटी संग छुटाउने रणनीतिमा लागेका छन् । नाबालक छोरीलाई अपहरण तथा जबर्जस्ती करणी गरेको जसरी पनि सजाय दिएर केटा र केटीलाई छुटाउनुपर्छ भन्दै उच्चजातीय सान र पैसाको घमण्ड देखाएर छोरीलाई नियन्त्रण गर्न खोजे भने प्रहरी प्रशासन लगाएर दमाई युवालाई सधैभरि जेल कोच्ने योजना गर्दैछन् । जेलमा रहेको छोराका परिवारलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले उल्टो ५० हजार जरिवाना तोकेपछि आफूहरुलाई पनि प्रहरीले समात्ने डरले कोठा छोडी दमाई परिवार भागेर बेपत्ता भएका छन । यो कुरा दलमर्दन कामीले आफनो फेसबुकमा भनेका हुन् ।
घरबेटी नेवार समुदायका हुन घटना काठमाडौंको हो घरबेटी स्वयं पनि भन्छन् दमाई भएकाले बाहुनले हेपेर अपहरण मुद्दा हालेका हुन केटालाई प्रहरीले पक्रेर लगेपछि उसको बाबुआमा पागल जस्तै भएका छ्न् ।धरौटी तिर्ने पैसा नभएर डरले भागेछ्न् । तपाईंहरु दलित अधिकार कर्मिहरुले सहयोग पुर्याइदिनु पर्यो भनेर अहिले अनुरोध गरिरहे पनि यो बिषयलाई कसैले ध्यान नदिएको दलमर्दनको भनाइ रहेको छ ।
परियार हिरासतमै भएको बेला प्रेमीको मायाले बस्नेत केटीलाई छटपटी हुन्छ अनि आफन्त अर्थात माइतिको बन्धन घेरा तोडेर अर्थात भागेर जसरी तसरी प्रेमीको डेरामा आएर सासुससुरालाई भेट्न् आएकी थिइन् । उनी भन्छिन् म यही केटासँग बिबाह गरेको हुँ । म यो केटासँग बिबाह गर्न पाइनँ भने मर्छु भन्दै केटाकी फुपु पर्ने आफन्तसँग रोइकराई गरिरहेकी छन् ।
तर अब नेपालको कानुनी आधारमा केटा जेल गएको अबस्था छ भने केटी त्यो केटा संग बिबाह गर्न आफू जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार छु भन्छिन यति सम्मकी उनको परिवारले उनलाई एक किसिमले बन्धनमा राखेको बाहिर भित्र गर्न नदिएको अबस्थामा भागेर केटाको आमाबुबालाई सासु-ससुरा स्वीकार्दै प्रहरी हिरासतमा केटालाई भेट्न समेत गएकी थिइन । तर प्रहरीले उनलाई भेट्न दिएन । केटाको आमा बुवालाई र फुपुलाई समेत छोरी अपहरण गरेको भनि बस्नेत परिवारले मुद्धा लगाएपछि २ लाख जरिवाना तोकिएको दलमर्दन बताउंछन । जरिवाना तिर्न नसके पछी जेल बस्नुपर्ने अबस्था आयो भनि दमाई परिवार भागेर बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको छ । साथीहरू अब के गर्ने ? उपाय के हुन्छ?समाधानको बाटो के हुन्छ ? यो काण्ड चर्कायो भनेर मै माथि खतरा छ भन्दै दलमर्दन फेसबुकमा लेख्छन। मैले नाम सम्बन्धित स्थान खुलाउन सकेको छुइन कारणहरु तपाइले बुझिहाल्नु हुन्छ । यो काठमाडौंकै कुनै स्थानको अहिले तत्काल घटेको जल्दोबल्दो घटना हो ।
उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध पछि केटाकेटी श्रीमान् श्रीमतीको रूपमा एक हप्ता आफन्तका गएर बसेका थिए । केटाले केटीलाई श्रीमतीको रूपमा घरमा ल्याएको दुई दिनसम्म घरमा सङ्गै बसे । केटाको आमाबाबु र भाइसँगै परिवारमा बसेको
दुई दिन पछी केटीको आफन्त आएर नाबालक छोरीलाई अपहरण र जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हाले छन र केटालाई प्रहरी हिरासतमा राखेका थिए । केटीलाई उनका आफन्त अर्थात माइती पक्षले घरमा लगेका थिए ।
अहिले बाबुआमा बाट बिद्रोह गरि भागेर प्रेमीको बाबुआमा रहेको डेरामा केटी आएकी छन ।मैले धेरै साथीहरूलाई भने वकिल लगाउन पर्ने भो परियार समाजका केही साथीहरूलाई समेत अनुरोध गरे तर खासै चासो देखाएका छैनन । दलमर्दनले भने । वकिल लगाउन पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि बिचरा केटा पक्षको आमाबाबुको आर्थिक अबस्था अत्यन्तै कम्जोर दिनानुदिन ज्यामीकाम गरेर परिवार हेरचाह गरेको अबस्था भएकोले उहाँहरुले पनि वकिल लगाउन सक्नुभएन भने मेरो पनि आर्थिक अबस्था अत्यन्तै जीर्ण छ । म आफैले मैनाको १०।११ हजार सम्मको औसधि खानुपर्ने अबस्था रहेको र केही अधिकारकर्मी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दा चासो नदिए पछी म आफू पनि निरीह र लाचार हुन पुगेको छु । दलमर्दनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
अहिले केटाका सबै परिवारलाई प्रहरीले पक्रेर लैजाने डरले भगेको अबस्था छ कहाँ लुकेका छन ?थाहा छैन खोज्नुपर्ने अबस्था छ । केटाकी आमा डिप्रेसनमा पुगेको अबस्था थियो भनेर घरबेटीले जानकारी गराउनुभएको छ। अहिले घरबेटीलाई समेत थाहा नदिएर कोठा छोडेर भागेको अवस्था छ। यो अबस्थामा के गर्ने ? यो परिवारलाई कसरी सहयोग पुर्याउने ? साथीहरू गम्भीर भएर सोचेर सल्लाह दिनुहुन अनुरोध छ । भन्दै दलमर्दन कामीले फेसबुकमा हालै पोष्ट गरेका छन् । दलित अधिकारकर्मीहरु कता गए खै ? (दियालीकाे फेसबुकबाट)
नागरिक अगुवा रसाईलीको गुनासोः बाहुनले मेरो घरमा नाग टाँस्नै छुटाए